SOANIERANA IVONGO : Matin’ny fokonolona ilay adala namira zaza tamin’ny antsy
Nisehoana trangam-piarahamonina tsy dia fahita firy tany Soanierana Ivongo, omaly maraina. Nisavorovoro ny mponina tao an-tampon-tanànan’i Soanierana Ivongo noho ny fisiana lehilahy voalaza fa adala mivezivezy ao an-tampon-tanànan’i Soanierana Ivongo. 8 août 2017
Zazakely tokony ho herintaona sy tapany eo no nofirain’ity lehilahy tsy salama saina. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana dia renim- pianakaviana iray nibaby zaza no sendra nifanena tamin’olona tsy salama saina iray teny an-dalana.
Tampoka teo dia nofirain’ity rangahy ity tamin’ny antsy teo amin’ny tendany ilay zaza. Maty tsy tra-drano avy hatrany ilay tsy manan-tsiny. Avotra soa aman-tsara kosa ny renin’ilay zaza tamin’io fotoana io na dia somary naratra mafy teo amin’ny tanany aza.
Tezitra ireo mponina raha nahita ny habibiana nataon’ilay olona tsy salama saina. Nirohotra namono azy noho izany ireo fokonolona nahita ny zava-doza nataony. Tsy noraharahan’ireo mponina ny maha adala azy fa samy nidaroka sy namono azy daholo ny rehetra nandalo. Namoy ny ainy, araka izany, ilay lehilahy tsy salama saina taorian’ny fitsaram-bahoaka nahazo azy.
Manodidina ny 40 taona eo ho eo ny ilay rangahy raha ny fijery azy avy ety ivelany, hoy ny loharom-baobao avy any an-toerana. Araka ny filazan’ireo fokonolona hatrany dia tsy salama saina vao tonga teo an-tanàna izy ity ary toa avy any amin’ny Faritra Sambava any no niaviany.
Mikorontana tanteraka ireo vahoaka any an-toerana hatramin’ny nanoratana ka miandry ny fandraisan’andraikitry ny Fanjakana izy ireo hatreto. Misy mantsy
ireo milaza fa tokony ho anjaran’ny mpitondra fanjakana ny misahana ireny adala mandehandeha ireny, ka eo indrindra no vao mainka mahatezitra ny mponina any an-toerana amin’izao fotoana izao. Andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha satria tsy maintsy hisy ny fanaovana famotorana ny tena zava-nisy marina.